Bata Dubai City Company Tiri Kurindira Expats 🥇
Titevere isu pamagariro evanhu | Dubai City Company
Dubai City Company inopa nyika-class Dubai's Guide uye nyaya inofadza. Tiri boka rekusika rine mazano akawanda nekutungamira-kufungidzira kutengeserana kwevhidhiyo mitambo. Tinotenda musimba rehutano hwemagariro evanhu kuti tiitise bhizimusi kukosha kuMiddle East.
Zvisinganyore: Jobho Kutsvaga & Visa
Dzorera ipapo ipapo ipapo, hapana mubvunzo wakabvunzwa.
Ramba Kuzviisa pasi
Isa CV: Dubai City Kambani
Iye zvino: Unogona kuisa CV yemahara kukambani yedu
Kana iwe usina mari? Iwe unogona kutumira yako yakagadziriswa CV kuchikwata chedu:
resume@dubaicitycompany.com Chikwata chedu chichava nekutarisa kune ako ruzivo. Isu tichakutumirawo meseji neruzivo rwakawanda.
Kuita Chikumbiro Chemashoko
Kuti ubvunze mubvunzo?
Zvino: Bata timu yedu
Kana iwe uchizoda kuwana rumwe ruzivo Iwe unogona kutumira ruzivo chikumbiro kuchikwata chedu:
office@dubaicitycompany.com Chikwata chedu chichava nekutarisa chako chikumbiro uye chidzokere kwauri mukati mezuva re3.
Mamiriro uye Mamiriro - Terms
Nhamba yekambani 09578474
Taura nesu - Dubai City Company yakamirira iwe!
Taura nesu Kuti tive nemamwe mashoko. Nekuda kwe Dubai City Company team service team team. Zvechokwadi kumirira mhinduro yako. Kana iwe uchida kutaura. Mumwe wevamiririri vamiririri. Ndapota shandisa email yedu yekambani muUnited Emirates. Kambani yedu nguva dzose inogamuchira basa vanotsvaka. Kune mamwe mibvunzo nemibvunzo mu Dubai, regai tizive. Kunyanya kana iwe uri kutsvaga basa kuMiddle East. Kune rumwe rutivi, isu tiri kugara tichigamuchira vashandisi vatsva post inoshandiswa patsva zvakare. Tiri kuronga kuva mutungamiri wekutsvaga basa rekutsvaga ku Dubai.
Dubai City Company inobatsira makambani ekutsvaga kuwana vashandi. Tiri kushanda nevose vanoita basa ravanotsvaka basa. Basa redu nderokuona kushandiswa kwemabasa. Kune vanoenda kune dzimwe nyika muUAE. Uyezve, chinangwa chedu ndechekukodzera bhizinesi redu rebhizimisi nesu. Pasinei nokuti uri kutarisa kuwana hurumende mabasa. Kunyangwe vane unyanzvi hwekutengesa nzvimbo kana kuti a bhangi uye mari yemabasa emari. Teknolojia uye basa repamutemo. Sezvowo vanhu vanogona kuwana mikana. Dubai City Company inogona kukubatsira. Nechiito chese nzira.
Nguva dzose taura nevanowanikwa muZimbabwe ku Dubai!
Sezvineiwo, tiri kupa ruoko runobatsira kwenguva yakareba. Kunyangwe izvi zvingave zvechokwadi. Asi zvinopfuura 1Million basa rekutsvaga vashanyi. Yakashandisa kambani yedu nekutarisa kutsvaga basa kuDubai. Nechikonzero ichi, isu tiri kutumira kutsvaga basa nhungamiro yekuburitsa muDubai. Hazvina mhosva kuti unobvepi. Tarisa uone zvedu Dubai Blog yekutsvaga. Uye semugumisiro, tsvaga kurota kwako basa muDhaibha nekambani yedu yekutsvaga basa. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, tiri kunyora mitsara yakajeka. Somuenzaniso, unogona kuisa CV kune avo vanoedza ku Dubai. Uye uone kuti ungazviita sei Contact makambani eGulf jobs. Zvose zvichawedzera mikana yako yekushanda muUAE.
Bata Dubai City Company